Sare u kacan ayaa badankiisa waxaa ku tabarucay saliidda, sonkorta iyo caanaha oo aad u qaaliyoobay, sida ay sheegtay hay’adda FAO.
Hay’adda Cunnada iyo Beeraha ee FAO ayaa sheegtay in saliidda, siiriyoolka, caanaha, iyo sonkorta ay bishii December sare u kaceen cel-celis ah 2.5%, taasi oo ah heerkii ugu sarreeyey tan iyo sanaddii 2014.
Guud ahaan, sare u kaca qiimaha cunnada ee shanti sano ee tagay ayaa ah 1.8%.
Caanaha iyo Sonkorta ayaa noqday kuwa uu sare u kaca ugu xooggan ku yimid. Caanaha ayaa bishii December ee 2018 qiimahooda waxay kordheen 3.3%, halka Sonkorta ay sare u kacday 4.8%.
Hilibka oo ka mid ah cunnooyinka ay aadka u isticmaalaan dadka ayaan qiimahiisa waxba iska beddelin cel celis ahaan, waxaana ugu wacan hoos u dhac ku yimid hilibka lo’da oo tiray sare u kac ku yimid hilibyada kale sida idaha.